Sida loo rakibo Discord-ka Linux | Laga soo bilaabo Linux
Mid ka mid ah qolalka lagu sheekeysto ee sida ugu dhaqsaha badan u sii kordhaya ee loogu talagalay ciyaaraha in waqtiga rikoodhka uu noqdo midka ay ugu jecel yihiin ciyaartoyda ayaa ah Jeexdin. Waxay leedahay tiro badan oo xulashooyin ah, way fududahay in la isticmaalo, si dhakhso leh, iyadoo lala dhexgalaayo meheradaha kala duwan ee ciyaarta, ... Khilaaf ku saabsan Linux ma laha taageero buuxda oo waxay ku jirtaa wajiga tijaabada.
ka Discord horumariya abuuray a Qorshaha taageerada Linux oo xitaa waxay sii daayeen nooc tijaabo ah oo loo yaqaan 'Khilaafka Canary'kaas oo hadda la rakibi karo oo loo isticmaali karo noocyada kala duwan ee Linux. Xaqiiqdii ma fiicna, laakiin si fiican ayey u shaqeysaa, hadaad gamer tahayna maxaad u isticmaali weyday?
Khilaaf ku saabsan Linux
1 Waa maxay khilaaf?
2 Ku rakib Discord Linux
2.1 Ku rakib Discord Debian / Ubuntu
2.2 Ku rakib Discord Fedora
2.3 Discord ku rakib OpenSUSE
2.4 Ku rakib Discord Arch Linux
2.5 Discord ku rakib Gentoo
3 Gabagabo ku saabsan Discord on Linux
Waa maxay khilaaf?
Jeexdin Waa a Codsiga VoIP loogu talagalay bulshooyinka ciyaaraha, taas oo saamaxaya codka iyo hadalka qoraalka ee udhaxeeya ciyaartoyda, gebi ahaanba waa bilaash, ammaan ah oo ka shaqeeya Linux, Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS iyo shabakad internet.
Waa bedel aad ufiican kooxda qaaliga ah ee TeamSpeak iyo Ventrilo, marka lagu daro ka raaxo iyo wax qabad badnaan badan Skype, astaamahani waxay Discord iska leeyihiin ilaa maanta in kabadan 26 milyan oo isticmaale.
Ku rakib Discord Linux
Ku rakib Discord Debian / Ubuntu
Nooca 'Khilaafka Canary'waxaa loo soo raray qaybinta ku saleysan Debian. Isticmaalayaasha Debian, Ubuntu, Mint, ama mid ka mid ah waxyaabaha ka soo jeeda, waa inaysan wax dhibaato ah kala kulmin soo degsashada .deb laga soo bilaabo bogga Discord, oo aad markaa ku rakibi karto maamulaha xirmooyinka aad jeceshahay. Waxaad sidoo kale raaci kartaa talaabooyinka soo socda:
Markaad dhameyso soo dejinta, ku rakib dpkg.
Marka la dhammeeyo, waad maamuli kartaa arjiga, sidoo kalena si fudud ayaa loo cusbooneysiin karaa.
Ku rakib Discord Fedora
Waxaa jira xirmo loogu talagalay Fedora ee 'Khilaafka Canary', Waxay ku jirtaa keydka' Copr ', oo waa la soo dejisan karaa.
# dnf copr wuxuu awood u siiyaa vishalv / discord-canary # dnf rakibida discord-canary
Discord ku rakib OpenSUSE
Discord ma laha xirmooyin loogu talagalay OpenSUSE, laakiin waxaad si fudud ugu beddeli kartaa xirmooyinka Debian Alien qoraalka. Tani waa inaad soo dejiso xirmada .deb.
Kadib isticmaal Alien si loogu badalo .deb leedahay a .rpm.
$ shisheeye -r -c khilaafaad-kanaari-0.0.8.deb
Goorma Alien xirmay Yast2.
# yast2 -i khilaaf-kanaar-0.0.8.rpm
Tani maahan xal dhammaystiran, laakiin waxay shaqeysaa iyadoo la abuurayo macmiil Discord ah oo u dhashay OpenSUSE.
Ku rakib Discord Arch Linux
Waxaa jira xirmooyin aan rasmi ahayn oo ah 'Khilaafka Canary'gudaha AUR, oo aad ka heli karto url-ka soo socda, https://aur.archlinux.org/packages/discord-canary/, sidoo kale waxaad kala soo bixi kartaa xirmooyinka rakibaaddahttps://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/snapshot/discord-canary.tar.gz. Xaaladdaas oo kale waa inaad furtid daamurka, aad galka galka cd kuna dhis makepkg.
$ cd / wadiiqo / to / khilaaf-kanaari $ mkpkg -sri
Discord ku rakib Gentoo
Waxaad ku dari kartaa Discord overlay dusha Gentoo adoo adeegsanaya layman.
Ka dib ku dar Discord ereyada muhiimka ah ee la aqbalay. Gudaha /etc/portage/package.accept_keywords
x11-misc / khilaaf
Taas ka dib, waxaad u soo bixi kartaa xirmo kasta
# soo bax - weyddiiso x11-misc / khilaaf
Gabagabo ku saabsan Discord on Linux
Khilaafka Linux ayaa wali ah nooc tijaabo ah oo ka mid ah aaladdan isgaarsiinta ee u fiican ciyaartoyda, waxay u badan tahay inuu leeyahay khaladaad qaar si loo saxo, taasoo ay tahay in lagu soo wargeliyo in la xalliyo. In kasta oo xilligan aysan ahayn waxa ugu fiican ee soo socda, haddana waxay aad uga badan tahay ikhtiyaarka ah inuu furmo biraawsarka inta aan ciyaareyno, sidoo kale mar dambe uma baahnid baahi loo qabo inaad adeegsato Windows si aad u isticmaasho.
Sidoo kale, aaladani waxay leedahay dhamaan astaamaha si ay ugula sheekaysan karto asxaabteena kale si hufan, oo muujineysa is dhexgalka xisaabaadkayaga ciyaaraha iyo waliba suurtagalnimada abuurista adeegyo gaar loo leeyahay.
Xogta ka socota LinuxConfig
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Sida loo rakibo Discord-ka Linux
Gacaliye Luigys: Waxaan u maleynayaa in akhristayaal badan ay ogaan doonaan in DesdeLinux uu horeyba uga hadlayo qeybin kala duwan maqaalkiisa. Hambalyo !.
Weyn, mar hore ayaan rabay wax sidan oo kale ah sidaa darteed waxaan la ciyaari karaa Dota saaxiibo badan. Muddo ka dib waan rakibay, waad mahadsantahay lizard.
Ku rakib nooca '0.0.15' ee loo yaqaan 'Openuse' oo si fiican uguma bilaaban: /, waxay muujisaa qalad, haddii aan xalliyo waan faalleeyaa
Waa salaaman tahay, waxaan isku dayayaa inaan khilaaf ku rakibo Arch Linux (Manjaro KDE) oo waxaan dhigayaa amarkii ugu dambeeyay "mkpkg -sri" wuxuu ii sheegayaa "amarka lama helin." Waxaan sidoo kale isku dayay inaan ku rakibo iyada oo loo marayo octopi / pacman / yaourt laakiin kuwan oo dhan waxay i siinayaan dhibaato aan ku soo ururiyo libc ++.
Waxaan rajeynayaa inaad i caawin karto oo aad mahadsanid horay ^^
Waxaa jira arin yar oo ka jirta Debian 11 Bullseye. libappindicator1 kuma jiro bakhaarka. Dadka qaar ayaa soo jeediya in libayatana loo isticmaalo beddel… laakiin weli ma awoodin inaan sameeyo. Macluumaad kasta oo aniga i anfacaya waa la mahadin doonaa.
Jawaab Mario Mey
MX Linux: Dhibaato deg deg ah, saaxiibtinimo leh qalab yaab leh